Sida loo Beddelaan VRO in AVI si fudud oo dhaqso
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan VRO in AVI
VRO waa qaab video inta badan loo isticmaalaa in duubayaasha DVD ah ee video duubo. Haddii aad DVD taariikhqorihii qabsatay videos qaab this, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay in loogu badalo faylasha VRO u sahlan loo maqli karo, la wadaago ama tafatir. AVI waa mid ka mid ah qaabab video ugu caansan ayaa si weyn loo isticmaalo Raaxo multimedia. Sidaa awgeed, si ay si fudud u ciyaaro ama wax ka bedel aad files VRO, u beddelaya AVI ah xal u noqon doonaan fiican. Wondershare Video Converter Ultimate Waa waxa aad u baahan tahay.
Kale badan iyagoo si loogu badalo faylasha VRO in AVI for loo maqli karo ee qalabka kala duwan sida Madaxweyne Siilaanyo Oo 360 iyo Blackberry awoodaan, software this sidoo kale badasha files si aad u wanaagsan ee ku haboon qalab aad la presets filaayo. Haddii aad rabto in aad si loogu badalo faylasha VRO ujeedooyin tafatir dheeraad ah, si toos ah u aad samayn karto hal madal ay halkii la isticmaalayo software gooni ah.
Qeybta 1: Best VRO in AVI Video Converter
Qeybta 2: Free VRO in AVI Converter
Qeybta 3: Online VRO in AVI Converter
Qeybta 4: Extended Knowlege u VRO iyo AVI
Beddelaan inay qaabab file kale sida VOB, wmv, MP4 iyo iwm
Diinta Dufcaddii Support tayo sameecadda ah.
Waxay bixisaa in-guriga muuqaalada tafatirka la Falanqeynta-waqtiga dhabta ah.
U beddelaan ama download ka goobood qaybsiga online caan ah.
Sida loo badalo VRO ah in AVI
Just raaci tutorial hoose si loogu badalo aad files VRO in AVI gudbiyo talaabo talaabo ah. Ma ahan farqi aad u badan haddii aad rabto doonaa inaad kala soo baxdo oo ku xidh gal Mac ah.
1. files Import VRO
Marka hore, badbaadiyo files VRO on your computer. Haddii ay horeba waa in aad kombuutarka, kaliya maraan si ay gal meesha ay ku kaydsan. Hel faylasha VRO aad rabto in aad si loogu badalo ka dibna kuwaa oo ka folder midig u gal Converter ah. Haddii kale, waxaad riixi kartaa dar Faylal ay xitaa buugga maxalliga ah iyo kuwa iyaga soo dhoofsadaan. Waxay ka muuqan doonaa interface sida thumbnails.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad wada midowdo dhammaan faylasha, waxaad u baahan doontaa si aad u hubiso isku darsamaan oo dhan videos galay mid ka mid file .
Riix Qaabka Output oo ka menu hoos-hoos, waxaad tagi kartaa in ay Qaabka category iyo markaas Video subcategory in ay doortaan AVI sida qaab wax soo saarka. Haddii aad rabto in aad si loogu badalo for loo maqli karo la filaayo on qalab gaar ah, fudud oo ay doorasho ka Device subcategory.
3. files Edit VRO (optional)
Si fudud riix Edit in bar menu in ay soo galaan suuqa kala tafatir ah. Waxaad jar kartaa wax kasta oo goobaha aan la rabin, geliso subtitile, dar aad jeceshahay music soo jeeda, dalban saamaynta gaar ah, qabsato dhalaalka iyo wax ka badan.
4. Ku bilow qaab beddelidda in ay AVI
Hit ka badalo button inuu ku soo bilowdo qaab beddelidda VRO in AVI. Waxaa laguu sheegi doonaa oo fariin pop-up mar uu buuxiyo oo kale oo aad kala socon kartaa waqti ka hartay looga baahan yahay inta aad wado hawsha kale ama hawlaha.
Video Tutorial: Sida loo Isticmaalo VRO in ay AVI Video Converter for Windows
# 1. Free Video Converter: Wondershare Free VRO in AVI Converter
Dhignaashada ee qaabab file caadi ah oo caan ah iyo sidoo kale diinta si toos ah u qalab gaar ah la qaadan karo sida iPhone, Samsung Galaxy S4, Madaxweyne Siilaanyo iyo iwm Waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa clips aad jeceshahay ka YouTube, ka dibna xaalkaa ama waxa loogu badalo u offline helaan.
Pro: Free in downloand iyo rakibi.
1. Muuqaalada tafatirka aasaasiga ah.
2. Support of qaab file waa laga qabanin in Video Converter Ultimate ah.
3. Qoraalka DVD, abuuridda iyo looma shido in la qalabeeyay.
Qeybta 4: Aqoonta Extended u VRO iyo Qaabka AVI
VRO waa weel warbaahinta taasi la mid ah VOB ah, oo kaliya in ay ka kooban audio multiplexed iyo content muuqaal diiwaan-duubayaasha DVD. AVI waa weel multimedia ay ku jiraan xogta audio iyo video labadaba. Waxa ay u ogolaataa audio-la-video loo maqli synchronous. Files AVI taageeraan badan audio geeyo iyo video
N / A Microsoft
Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan qaabka file VRO